I-Apple Pay iyeka ukusebenza eRashiya ngenxa yengxabano ne-Ukraine | Iindaba ze-iPhone
I-Apple Pay iyeka ukusebenza eRashiya ngenxa yengxabano ne-Ukraine
Phezu kwazo nje izisongelo ezivela kwiEuropean Union kunye neUnited States, iRussia ayizange iwuhoye loo nto yaza yagqiba kwelokuba ihlasele iUkraine. Emva kohlaselo, oorhulumente baseMelika nabaseYurophu baye ibeke uthotho lwezohlwayo zoqoqosho kweli lizwe ebandakanya izithintelo kwintengiselwano yeebhanki zaseRashiya ngaphandle kwelizwe.
Isiphumo sesi sithintelo sithetha ukuba zombini iApple Pay kunye neGoogle Pay, ziyekile ukusebenza elizweni. Njengoko ingxelo yeBhanki Ephakathi yaseRashiya, iibhanki ezinkulu ezintlanu zaseRashiya zibone imisebenzi yazo yamazwe ngamazwe ithintelwe ngenxa yezohlwayo ezivela kwamanye amazwe, ukuthintela abathengi babo ekusebenziseni amakhadi abo phesheya.
Nabo abanakwenza ukudluliselwa kwemali kwiinkampani ezi kwiManyano yaseYurophu naseUnited States.
Iibhanki ezichaphazelekayo zezi: Iqela le-VTB, i-Sovcombank, i-Novikombank, i-Promsvyazbank kunye ne-Otkritie. IBhanki ePhakathi yaseRashiya ithi amakhadi akhutshwe zezi bhanki zintlanu akasebenzi nge-Apple Pay okanye iGoogle Pay, ekubeni omabini amaqonga. zisekelwe eUnited States.
Abasebenzisi baseRashiya banokuqhubeka nokusebenzisa amakhadi akhutshwe zezi bhanki eRashiya ngaphandle kwengxaki, kodwa kungekhona ngeewallet zedijithali zenkampani yaseCupertino okanye iGoogle.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, uSekela Mongameli waseUkraine wathumela ileta yoluntu nge-Twitter kwi-Apple ukuze inkampani iyakukhupha zombini iApp Store kunye neMac App Store, isigqibo esingakhange sichazwe okwangoku.
Esi sigqibo siya kulimaza abasebenzisi (abangayi kukwazi ukufaka nayiphi na isicelo njengoko sonke sisazi). Kodwa, ngokutsho komongameli wase-Ukraine, iya kwenza abasebenzisi baya kuvukela urhulumente befuna ukuba aluyeke uhlaselo lwaseUkraine, into engenakwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple Pay iyeka ukusebenza eRashiya ngenxa yengxabano ne-Ukraine
Olu luyilo oluvuzayo lwephaneli yangaphambili ye-iPhone 14